Waaheen Media Group » Weriyayaal Iyagoo Idaacad Toos u Tabinaya la toogtay
Browse:Home Radio Waaheen Weriyayaal Iyagoo Idaacad Toos u Tabinaya la toogtay	Weriyayaal Iyagoo Idaacad Toos u Tabinaya la toogtay
Comments Off on Weriyayaal Iyagoo Idaacad Toos u Tabinaya la toogtay	Saddex nin ayaa la xidhay kaddib markii la toogtay laba weriye oo si toos ah u tabinayay idaacad ku taal Jamhuuriyadda Dominica.
Mid ka mid ah weriyayaasha ayaa la toogtay isagoo duubaya muuqaal si toos ah looga baahinayay Facebook-ga.
Muuqaalka ayaa muujinaya tabintii tooska aheyd oo ay soo dhexgashay rasaas iyo haween argagaxsan oo ku qeylinaya “Rasaas baa dhacday! Rasaas baa dhacday! Rasaas baa dhacday!”.
Booliska ayaa sheegay in toogashadu ay Salaasadii ka dhacday magaalada San Pedro de Macoris, ee ku taalla bariga magaalada caasimadda ah ee Santo Domingo.
Labada weriye ee la dilay ayaa kala ah soo jeediye Luis Manuel Medina iyo soo saare Leo Martinez.
Haweeney sidoo kale ku dhaawacantay weerrarka ayaa haatan qalliin lagu hayaa sida ay sheegeen mas’uuliyiinta maxaliga ah.
Ragga la xidhay ayaanan weli lagu soo oogin wax dacwad ah, booliskuna waxa uu sheegay in aanay garanayn sababta keentay weerrarkan.
“Baaritaanadu waa ay bilowdeen oo waannu isku dayi doonnaa inta karaankayaga ah inaannu runta ka sal gaarno.” Xeer Ilaaliyaha Guud ee Dominica, Jean Rodriguez, ayaa sidaa u sheegay warbaahinta maxaliga ah.
Bishii Agoosto 2015, laba weriye oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa lagu toogtay Virginia iyagoo si toos ah TV ugu warramaya.